Muxuu ka yiri Santiago Solari kadib guushii weyneed ay xalay kaga gaareen Victoria Plzen tartanka Champions League? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Muxuu ka yiri Santiago Solari kadib guushii weyneed ay xalay kaga gaareen Victoria Plzen tartanka Champions League?
November 8, 2018 at 08:37 Muxuu ka yiri Santiago Solari kadib guushii weyneed ay xalay kaga gaareen Victoria Plzen tartanka Champions League?2018-11-08T08:37:26+00:00 CAYAARAHA
(Real Madrid) 08 Nof 2018. Tababaraha Real Madrid Santiago Solari ayaa ka hadlay sida uu ugu qanacsan yahay guushii ay kooxdiisa ka gaartay Victoria Plzen, kulankooda afaraad ee wareega group-yada tartanka Champions League.
Real Madrid ayaa gaartay guusheedii 3-aad ee xiriir ah tan iyo markii uu shaqada si ku meel gaar ah kula wareegay tababarka Santiago Solari, kadib markii shaqada laga ceyriyay Julen Lopetegui.
Santiago Solari ayaa kulanka kadib wuxuu si toos ah kala hadlay saxaafada dareenkiisa kaga aadan guusha weyn ay tartanka Champions League kaga gaareen kooxda Victoria Plzen.
“Waxaan ciyaarnay kulan aad halis u ah, waxaan ciyaarta ku daawanay goolal qurux badan, wax sahlan ma ahan in aad 5-0 ku aadkaato tartanka Champions League, hadii aadan bixin qaab ciyaareed wanaagsan”.
Intaas kadib Santiago Solari ayaa wuxuu ka hadlay sababta uusan u ciyaarin Keylor Navas kulankii xalay wuxuuna yiri:
“Waa go’aan, waana gaaray, Keylor Navas waana jeclahay, waxaan u hayaa ixtiraam weyn shaqsi ahaan, intaas kadib waa ciyaaryahan aad muhiim ugu ah kooxda, muhiim ma ahan inaan noqoto laacib muhiim ah kaliya marka aad ciyaareyso”.
Santiago Solari ayaa intaas kadib wax laga weydiiyay hadii uu doonayo inuu sii wato shaqada kooxda Real Madrid ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedkan wuxuuna kaga jawaabay:
“Waxaan kaliya aan ka fekiri karo ayaa ah kulanka soo socda iyo sida aan ku heli lahayn dhibcaha, sidaas darteed waa inaan diirada saarnaa kulanka soo socda”.
« DAHABSHIIL: Waxuu Astaan u yahay Dhiiranaanta, Dhaaya-fogaanta iyo Dhabar-adayga Soomaalida (WQ: Maxamuud Cali Sh Maxamed “Walaaleye”)
Natiijooyinkii iyo xaqiiqooyinkii Group H ee tartanka Champions League-ga »